चीनले बनाएको ‘कृत्रिम सूर्य’ ले बनायो नयाँ विश्व रेकर्ड ! - Himali Patrika
चीनले बनाएको ‘कृत्रिम सूर्य’ ले बनायो नयाँ विश्व रेकर्ड !
हिमाली पत्रिका १६ जेष्ठ २०७८, 10:22 am
बेइजिङ । शुक्रबार चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले ‘कृत्रिम सूर्य’ पनि भन्ने गरिएको, ‘फ्युजन रियाक्टर’ को परीक्षणका क्रममा १२ करोड डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल गरि नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान लामो समय अगाडि नै सुरु भएको हो जसमा ३०० वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरु तैनाथ गराइएको छ । यस उपकरणमा भ्याकुम सिस्टम, आरएफ वेभ सिस्टम, लेजर सिस्टम अनि माइक्रोवेभ सिस्टम समावेश रहेको छ ।
फिजिक्स र इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा यो चीनको अत्यन्तै ठूलो उपलब्धी भएको बताइएको छ ।
कोइला, तेल, प्राकृतिक ग्यास जस्ता पदार्थहरु माँसिदै जाने र कुनैदिन सकिने खतरामा छन् भने तिनले वातावरणलाई पनि उत्तिकै हानि पुर्याइरहेका छन् । यसरी विद्युतको बढ्दो मागसँगै वातावरणमा परिरहेको लगातार असरका कारण विज्ञहरु ऊर्जा उपभोगबारे ठूलो द्विविधामा छन् ।
त्यसैले पनि चीनले यस फ्युजन परियोजनामा लगातार काम गरिरहेको छ जसले वायुमण्डललाई हानि पुर्याउने किसिमका कुनैपनि ग्यास उत्पादन नगरि स्वच्छ ऊर्जा निकाल्न सक्छ । यस कृत्रिम सूर्यका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भने पृथ्वीमा असिमित रहेकाले पनि चीनले फ्युजन ऊर्जालाई नै सबैभन्दा प्रभावशाली ऊर्जा मानेर यस मार्फत देशलाई कार्बनमुक्त गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिरहेको छ ।